माइत जान लागेकी श्रीमतीलाई रोक्न नसकेपछि डाँको छोडी रोए यी श्रीमान्! (भिडियोसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
माइत जान लागेकी श्रीमतीलाई रोक्न नसकेपछि डाँको छोडी रोए यी श्रीमान्! (भिडियोसहित)
काठमाडौंः श्रीमतीलाई माइत जानबाट रोक्न नसकेको भन्दै भारतमा एक जना डाकँो छोडी रोएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ ।
भिडियोमा पत्नी पतिसँग रिसाएर माइत जान लागेकी हुन्छिन्, पति भने पत्नीलाई रोक्न रेलवे स्टेसन पुग्छन् । अनि सयौं कोशिसपछि पनि पत्नीलाई फर्काउन नसकेपछि पति डाँको छोडेर रुन शुरू गर्छन् ।
यो भिडियो फेसबुक, युट्युब लगायत सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । भिडियो भारतको कुन ठाउँको हो भन्ने अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन ।
भिडियोमा देख्न सकिन्छ कि पत्नी रेलवे स्टेसनमा उभिइरहेकी हुन्छिन् । त्यही पति पुग्छन् र पत्नीलाई रोक्न खोज्छन् । उनले भन्छन्, ‘मलाई छोडेर नजाउ, म सधैं तिम्रो साथ रहन चाहन्छु ।’ तर पत्नीले मान्दिनन् । उनले सम्बन्धविच्छेदको समेत कुरा गरेको भिडियोमा देख्न सकिन्छ ।
ट्याग्स: भारत, माइत, श्रीमती–श्रीमान्, श्रीमान्